Shiinaha Cadka gariirka Mashiinka Duugista Murqaha Mashiinka iyo alaabada | Zhaolong
Gunta Murqaha Murqaha Murqaha Duugista
Warshaddii hore RMB qiimaha cashuurta (yuan / go'an)
Nooca mootada ： 5025 DC aan burush lahayn
Awoodda Batariga ： 2500mAh （18650 Li-on Battery 6pcs）
Madaxyada Duugista heads 6 madaxyada duugista
Baaxadda masaafada ： 10.0mm
Xuddunta mashiinka ： 50 mN.m
Beddel: 5-boos beddel
Taabta xakamaynta shaashadda
Xawaaraha Wareeg ： 1400-2700RPM
Buuqa ≤ ：55db
Waqtiga Bixinta ： 1.5-3hours
Waqtiga Shaqada ： 3-8hours
Cabbirka badeecada ： 176.5x70x233.5mm
sanduuqa qalabka bacda + sanduuqa boostada
1. MAXAAD U BAAHAN TAHAY ---- Massage gun wuxuu ka caawin karaa isticmaalaha inuu yareeyo muruq adkaanta iyo xanuunka, wuxuu kordhiyaa cadaadiska dhiigga, wuxuu hagaajiyaa caafimaadka guud ee unugyada jilicsan ee jirka, weliba, wuxuu ka hortagi karaa fasciitis oo ah nooc xanuun badan adag tahay in la bogsado barar ka dhasha isku dhejinta u dhexeeya fascia iyo murqaha.
2.Full Body Relief 5 Speed ​​& 6 Massage Head ---- qoryaha badan oo isku dhafan ayaa leh 5 xawaare / jaangooyo la isku hagaajin karo & 4 talooyin madaxa duugista ah oo lagu bartilmaameedsanayo dhibcaha cadaadiska qoorta, dhabarka, kubka, lugta, garabka, sinta iyo wax ka badan.
3. Naqshadeynta Miisaanka Khafiifka ah - Ergonomic aluminium aluminium biraha ergonomic Massager wuxuu hubiyaa in Massage Gun uusan fududeyn oo keliya laakiin sidoo kale uu waari karo. Qabsashada silikoonku waa mid jilicsan oo fudud gacmaha, ka hortageysa siibashada iyo ka soo dhaca gacanta oo loo hubiyo inaad si buuxda u xakameyso soo noqnoqoshada iyo xoojinta daaweynta muruqyadaada.
4. Taabashada LED-ka ---- Taabashada LED-ku waxay kuu oggolaaneysaa inaad isku hagaajiso 5 heer xawaare oo kala duwan, oo ku saleysan kooxdaada muruqyada iyo dookhaaga.
Duugista qoryaha madaxa ku duug
Qoryahayaga duugista ah waxaa la siiyaa 6 la qaadi karo, oo sahlan in la nadiifiyo madaxyada la is-weydaarsan karo. Si wada jir ah madaxyada kala duwan waxay u taageeraan daaweyn kala duwan si ay u taageeraan caafimaadkaaga iyo waxqabadkaaga.
Madaxa wareega - Duugista muruqyada jirka oo buuxa. Ku xirnaanta ku habboon bilowga.
Madaxa wareega yar - Duugista muruqyada jirka oo buuxa. Si xoog badan diirada loo saaro shaqada muruqyada.
Madaxa fidsan - Duugista murqaha jirka oo buuxa. Wixii xoojin iyo qoto dheer.
Madaxa Pneumatic - Duugista muruqyada xasaasiga ah. Si loo maareeyo meelahaas xanuunka badan.
Madaxa lafdhabarta - Duugista murqaha lafdhabarta. Ku xirnaanta madaxa gaarka ah.
Madax ballaaran oo fidsan –Magaca Murqaha. Yaree cidhiidhiga muruqyada, kordhi dabacsanaanta
Hore: Qoriga duugista ah ee nudaha unugyada muruqyada ee xasaasiga ah
Xiga: Xararad Gacan-qabsi ah oo Fasax ah oo Xambaarsan Qormo Muruq-yar oo Murugo leh
Massage Gun Gun Cadaadis Cadaadis Cudurka Massage ...
Qalabka muruqyada qotada dheer ee duugista murqaha
Massage aan caday lahayn 30 xawaare hoose oo dhawaq leh ...
Gariirka Qoriga Duugista Murqaha Jirka
Xararad Electric Fascia Gun Portable Powerful ...
Duugista unugyada qotada dheer ee xanuun xasaasiga ah ...